Ithegi: ividiyo ebukhoma | Martech Zone
Ithegi: ividiyo ebukhoma
Kutshanje sabelane nge-infographic kunye nenqaku elineenkcukacha ngamanyathelo asibhozo okusungula isicwangciso sakho semidiya yoluntu. Uninzi lwenu sele luqalisile ngesicwangciso-qhinga sakho semidiya yoluntu kodwa usenokungaboni kubandakanyeka njengoko ubukulindele. Ezinye zazo zinokucoca ubuchule ngaphakathi kweqonga. I-Facebook, umzekelo, kunokuba uhlawule kakhulu ukukhuthaza umxholo wakho kunokuba ubonakalise ngokuthe ngqo kuye nakubani na olandela uphawu lwakho. Konke kuqala, ewe,
Ukufumana amaThuba okuThengisa ngokuZenzekelayo
NgoMvulo, Matshi 21, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 16, 2013 Douglas Karr
Sisebenza nzima ukuzenzela iinkqubo zabaxumi bethu. Njengoko uqala ukucinga ngemizamo yakho yentengiso, ulichitha phi elona xesha lililo? Iinkampani zihlala zinciphisa okanye zithathe kancinci ixesha elithathwayo ukuhamba phakathi kweenkqubo. Sithumele nje malunga nexesha elithathwayo ukurekhoda izikhokelo kunye neendawo zokuchukumisa kwiCRM- kunye nemveliso eyenza lula umsebenzi. Amathuba kukuba uyayenza le nto imini yonke
Ividiyo> = Imifanekiso + namabali
NgoMgqibelo, nge-9 kaFebruwari ngo-2008 Lwesine, Okthobha 31, 2013 Douglas Karr
Abantu abafundanga. Ayisiyonto imbi leyo ukuyithetha? Njengebhlog, iyaphazamisa ngakumbi kodwa kuya kufuneka ndivume ukuba abantu abafundanga ngokulula. Iimeyile, iiwebhusayithi, iibhlog, amaphepha emhlophe, ukukhutshwa koonondaba, iimfuno zomsebenzi, izivumelwano zokwamkelwa, imiqathango yenkonzo, iindlela zokuyila…. akukho mntu uzifundayo. Sixakekile-sifuna ukufikelela kwimpendulo kwaye asifuni kuchitha xesha. Ngokwenyani asinalo ixesha. Le veki yayiyiveki yeemarike kum